Gabdho Waxbarashada Jaamacadda dhammeyey oo isku diyaarinaya in ay dhaqaalo ka sameeyaan Cilaan saarka – SOMA: Somali Media Association
In ka ku dhow 100 Gabar oo bartay xirfadaha cilaan saarka, iyo Make Up-ka, ayaa isku diyaarinaya sidii ay uga faa’iideysan lahaayeen malaha ciida iyagoo oo diyaar garow xooggan ugu jira soo bandhigadda waxa ay soo barteen si ay ugu shaqaystaan una hormariyaan xirfadooda.
Deeqo Xirsi Xasan oo kamida gabar ka baratay xirfada cilaan saarka Xarunta Hormarinta Qoyska ayaa sheegeysa in ay hadda diyaar u tahay sidii ay ugu shaqeysan lahayd, xirafdda ay soo baratay intii u dhaxeysay bilihii Febraayo iyo Maarso ee sanadkaan.
Waxa ay tilmaamtay in ay sameysatay boor, ay si u arkaan dadka xaafadda la deggan, oo ay dooneyso in ay cilaan saarka ka bilowdo. Deeqo waxaa u diyaarsan qol kamida kuwa guriga ay degan tahay, maadaama aysan awoodin bixinta qarashka ku baxaya haddii ay degto meel kiro ah.
Deeqo oo dhammeysay heerka Koowaad ee Jaamacadda Laba sano kahor ayaan helin shaqo ay muddo kabadan sanad raadineysay, iyadoo markii dambe go’aan ku gaartay in ay barato xirfadaha lagu shaqeysan karo si ay kaalin uga soo muuqato qoyskeeda.
”Malamaha ciida masha allah aniga qaasatan deeqo boor baan samestay waxan usaayayaa sadka xafadoodan baan usaara waxan raba inan ku guulaysto. Waxan ku doortay waa xirfad hoaray usocoto oo meel kasta ka shaqaynaysa waxaana ugu talagalay meel kasta aan tago in ay noqoto waxan xirfad uleeyahay oo markas jabkayga kala so baxo”
Sidoo kale Safiyo Yuusuf oo kamida gabdhaha dhammeeyey heerka koowaad ee Waxbarashada Saddex sano kahor ayaa sheegeysa in ay weyday shaqadii ay ku taameysay, balse aysan wali ka quusan, iyada oo baratay xirfadaha Cilaan saarka, Make Up-ka.
Waxa ay sheegeysaa in tan iyo markii ay baratay xirfadaha ay go’aansatay in ay ku shaqeysato oo ay Haweenka xaafadda la degan u saarto cilaanka, sidoo kalana u mariso Make Up-ka, maalmaha Xafladaha & aroosyada aadayaan, Saddexdii bil ee lasoo dhaafay.
Safiya oo haysata laba carruur ah ayaa ka rajo wanaagsan ka qabtay in ay kasoo saarto xirfadaha ay ku shaqeysaneyso, lacagaha dharka Ciidda ee carruurteeda oo ay deen kusoo qaadatay, iyo sidoo kale aadida goobaha damaashaadka.
“Walahi in aan noqoqno qof meel furtay ardaydii, Waxay baratay maanta ku shaqaysanaya inana noqonan jeclahay sax weye xirfadan marka kowaad an baranayay isma dhaheen ilaa heerkaas ayaad gaaraysa masha allah lkn maanta waxan taganayay heer aan usaari karo ilmaha xaafada iyo dadka wawaynba”
Xarunta Hormarinta Qoyska ee ku taalla degmada Hodan ee Gobolka Banadir Haween dhigta & kuwa dhammeeyey bishii Apri ee lasoo dhaafay, oo gaaraya ilaa 200 oo Haween ah ay isku diyaarinaya qaarkood xilligaan in ay Macallimiintooda ka caawiyaan maalmaha Ciidda xirfadihii ay barteen, halka ay jiraa qaar kale oo ay iskood isugu diyaariyey in Guryaha ku saaraan Cilaanka.
Maamulaha Xarunta Hormarinta Qoyska, Rasmi Mire Ali oo haweenka lagu baro xirfadaha ay kamid yihiin Cilaan saarka & Make Up-ka, ayaa SOMA u sheegtay in u jeedeeda guud ay tahay in dumarku ay bartaan xirfadaha u fududenaya in magaalada ay ka shaqaystaan.
“Maya wax dhaqaalo ah kuma lihinkaliya ardayga waxan ku dhiira galinaa in uu shaqadiisa horay uwato hormar fiicana gaaro intaaa iyo inka badan gaari karo uuna dadaalo waxan u kormeerno waxay tahay inan dhiira galino usameeno oo kaliya wixii dhididkiisa ah asagaa iska leh macalimiin ayaa ku wehlinaya kormeeraya oo waxyaabihii bulshada u qaban lahaayeen kor kala socda haday wax qaldan wax usaxaaya haday wax si ka yihiin marwalba garab taagan oo la tashi la sameeya”
Maalamaha ciida ayaa ah maalmo ay haweenku bartay Xirfadda cilaan saarka ay aad u jecel yihiin, maadaama ay dhaqaalo ka sameynayaan, sidoo kalana ay ku hormarinayaan xirfadooda, maadaama ay u saarayaan Cilaanka Gabdho yar yar & kuwa waa weynba.
WD: Shukri Caabi oo ka tirsan Radio Risaala.
Guriceel oo markii ugu horreysay yeelaneysa Xarun lagu karantiilo dadka qaba Covid-19